Programmer's Diary: သံလွင်ကိုအိပ်မက်တဲ့အခါ ငါတို့ရဲ့တေးသွားကို ကြားလိမ့်မယ်
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:59 PM
`မြန်မာလူငယ်တွေ အားလုံးကြားအောင် သံလွင်ရဲ့ တေးသွားတွေကို သံပြိုင်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ခရီးဆက်ကြဦးမယ်။ ´တဲ့။ ကြိုက်တယ်ကွာ။ အဲဒီစာကြောင်းလေး။
August 18, 2007 5:45 AM
အမှတ်(၁)ကတည်းက ခုအချိန်ထိ.. နောက်ထွက်လာမဲ့ အမှတ်စဉ်တွေ အတွက် အမြဲအားပေးလျှက်ပါ..
August 18, 2007 2:24 PM
Thanlwin,ariver in my heart !
သံလွင်အိပ်မက်ကို စထွက်တဲ့အချိန်ကစလို့ မပျက်မကွက် အားပေးသူပါ။
သံလွင် အိပ်မက် ပိုမို အောင်မြင်ပါစေ။
ှု သံလွင် ကို အမြဲ အားပေးလျက်ပါညီညီရေ။ူ
I couldnt read it.
Is itacorrect url for thanlwinainmat "www.thanlwin.com/thinlwinainmat"??